Dhibaatada Ugu Badata ee Khadka Ankara Sivas YHT Line! 60 Kiiloomitir Tareenka Oo La Saaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDhibaatada Ugu Badata ee Khadka Ankara Sivas YHT Line! 60 Kiiloomitir Tareenka Waa Laga Saaray
21 / 01 / 2020 06 Ankara, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
ankara sivas yht line dhibaato ballaca masaafada tareenka la gooyay
Khadadka tareenka xawaare sare leh ee 406 kiiloomitir oo isku xiri doona Ankara iyo Sivas, xargaha la dhigay qaybta 60-kiiloomitir ayaa laga saaray dhibaatadii ka dhacday “ballaarinta”. Waxaa la go'aamiyay in ballaarinta, oo la dhigay xariiqda loona qorsheeyay in kor loogu qaado rarka dhici doona inta lagu guda jiro gaadiidka, wuu jabay, fiiqan yahay oo qotodhay, wuxuu muujiyey calaamadaha gabowga ka dib markay la xiriiraan qorraxda. Waxaa la go’aamiyay in la beddelo ballaarinta, taas oo noqotay mid aan socon karin 5 sano.
HaberturkSida ku xusan warbixinta Olcay Aydilek oo ka socota; Markay digniinta TCDD, shirkada qandaraaslaha ah waxay kuxireen biraha 60 kiiloomitir. Wuxuu bilaabay inuu beddelo ballaarinta. Waxaa la sheegay in howshan loo soo gabagabeeyey illaa xad weyn. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qiimaha (qiyaastii 10 milyan oo TL) uu qariyey qandaraaslaha.
Waxaa ka mid ah mashaariicda kaabayaasha socda ee ugu weyn dalka Turkiga oo u dhaw in dhamaadka line Tareen Sivas-Ankara High Speed. Kumanaan kun oo dad ah ayaa ka shaqeeya saacado dheeraad ah tobanaan meelood oo meel iyada oo la raacayo khadka 406-kiiloomitir si loo ilaaliyo mashruuca nuska labaad ee sanadkan.
Marka mashruuca la dhammeeyo, waqtiga safarka ee u dhexeeya Sivas iyo Ankara ee loo yaqaan 'YHT' wuxuu hoos ugu dhici doonaa 2 saacadood. Waxay noqon doontaa 5 saacadood inta udhaxeysa Istanbul iyo Sivas.
In kasta oo howlaha dhismuhu si xawli ah u socdaan, waxaa la go'aamiyay in dhibaato ka jirto “balladhinta” la saaray qayb ka mid ah khadka. Kooxaha kormeerka TCDD waxay ogaadeen inay jirto cilad farsamo oo ah "gabowga" ballaadhka ee 60 kiiloomitir dhul balaadhan oo shaqadooda gudaha ah.
Marka, waa maxay ballaarinta oo waa maxay dhibaatadu? Dhagxaanta lagu dhajiyo isgoysyada laynka, oo loo qorsheeyay in kor loo qaado culeyska ka dhici doona inta lagu guda jiro safarka, waxaa loo yaqaan “ballast”. Ballaadhani wuxuu leeyahay nolol dhaqaale oo 5 sano ah. Waxaa soo baxday in ballaadhka lagu sameeyay aaggan ay muujineyso calaamad "da 'ah" kadib xiriirkii qorraxda. Waxaa la go'aamiyay inuusan qaadi karin culeyska isla markaana ay dhowaan faafineyso.
Khadadka waa laga saaray
Maamulka TCDD wuxuu uga digay shirkada qandaraaslaha qaadatay mashruuca. Fiilooyinka qaybta 60 kiiloomitir ah waa laga saaray. Habka beddelka Ballast ayaa bilaabmay. Waxaa la sheegay in howshan loo soo gabagabeeyey illaa xad weyn. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qiimaha (lagu sheegay 10 milyan oo TL) uu qariyey qandaraaslaha.
Ankara Sivas YHT Khadka Tareenka ee Wadada Tareenka ee Ugu Horeeyay Ayaa La Qabtay
Ankara Sivas YHT Line Talo Bixinta Xawaareynta Oo La Dardargeliyay
Ma jiraan dhibaatooyin dhinaca amaanka ah oo ka jira TDB Ankara-Istanbul YHT
Wadada Tareenka Sare ee Ankara Sivas Xawaaraha Sare
Ogeysiiska Iibsiga: Ankara-Eskişehir Speed ​​Speed ​​Line KM: 460 + 800 - 461 + 700 steel…
Saldhigyada Tareenka Xawaare Sare ee Ankara Sivas
Dhibaatada Ugu Khaldan ee Khadka Ankara Sivas YHT Line